‘स्मार्ट इक्यान’का लागि मेरो उम्मेदवारी – शेषराज भट्टराई |
‘स्मार्ट इक्यान’का लागि मेरो उम्मेदवारी – शेषराज भट्टराई
प्रकाशित मिति :2018-04-13 06:53:48
शेषराज भट्टराई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा परिचित नाम हो । लामो समयदेखि परामर्श व्यवसायमा सक्रिय युवा व्यवसायी भट्टराई अर्विट इन्टरनेशनल एजुकेशनका सञ्चालक हुन् । अर्विट एजुकेशन परामर्श क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल सस्था हो । कठीन अवस्थामा अर्विटको व्यवस्थापन सम्हालेका भट्टराईले अर्विटलाई एउटा बेग्लै र सफल उचाइमा उभ्याएका छन् ।
अर्विट आज परामर्श क्षेत्रमा एउटा स्थापित ब्राण्ड हो । बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुमा नेतृत्वको अनुभव बटुलेका भट्टराई पर्याप्त बौद्धिक क्षमता, दूरदर्शिता, नैतिकता र मिलनसार व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन । आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर गरेका भट्टराईले नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) आसन्न निर्वाचनमा विष्णुहरि पाण्डे नेतृत्वको टिमबाट महासचिव पद लागि उमेद्वारी दिने घोषणा गरेका छन् । उनै भट्टराईसँग एजुकेशन न्यूजले गरेको कुराकानीको मुख्यअंश ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)
इक्यानको निर्वाचनमा महासचिव पदमा प्रतिष्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, निर्वाचनमा जाँदै गर्दाका एजेण्डाहरु के छन् ?
हामीले हिजोको इक्यान र आजको इक्यानमा निकै फरक पाउँछौ । एजुकेशन कन्सलटेन्सी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सुरुवाती दिनमा इक्यानले जुन अग्रसरता लिएको थियो त्यो तत्कालिन अवस्थाको आवश्यकता थियो । समयसँगै इक्यानका कामहरु पनि परिवर्तन हुँदै गएका छन् । तत्कालिन समयमा व्यवसायलाई नियमन गर्ने, त्यसकालागि नीति बनाउने काम प्राथमिकतामा थियो भने अहिले त्यो परिवर्तन त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनि नीतिमा रहेका कमीकमजोरीलाई परिमार्जन गर्न र इक्यानलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने चूनौती थपिएको छ । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायलाई अझ प्रभावकारी तथा सेवाहरू नियमित एवम् पारदर्शी रूपमा, छिटो छरितो गर प्रवाह गर्न सक्षम बनाउन प्रयास तथा पहल गर्नेछु ।
अब इक्यानलाई परम्परागत पद्धतिबाट सञ्चालन गरेर हुँदैन । अबको इक्यान भनेको ‘स्मार्ट इक्यान’ हो । त्यसका लागि मैले केही कार्ययोजनाहरु तयार पारेको छु । इक्यानलाई स्मार्ट र बृहत बनाउनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकायमा म आफै भए भने सहज हुन्छ । त्यसैका लागि मैले महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएको छु ।
इक्यानका अगाडि आगामी २ वर्षे कार्यकालमा के कस्ता चूनौतीहरु देख्नुहुन्छ ?
कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा इक्यान सबैभन्दा ठूलो संघ हो । जेठो संघ पनि हो । अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा जे जति व्यवसायिकता आएको छ । जे जति विकास वा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ त्यसको अग्रसरता इक्यानले नै लिएको थियो । विगतमा भएको इक्यानको भूमिकालाई हेर्ने हो भने व्यवसायीका तर्फबाट आगामी दिनमा पनि इक्यानले त्यसको नेतृत्व लिनैपर्छ ।
शिक्षामन्त्रालयको तथ्यांकलाई हेर्ने हो हाल मुलुकभर २ हजारभन्दा बढी संस्था सञ्चालनमा छन् । तर इक्यान अन्तर्गत करीब ४०० मात्रै संस्था आबद्ध छन् । यस अर्थमा इक्यान बाहिर पनि ठूलो संख्यामा संस्थाहरु छन् । ती संस्थाहरुलाई इक्यानमा ल्याउने वा ती संस्थासँग इक्यान बाहिर भएरै पनि सहकार्यका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, समय परिवर्तनसँगै आइरहने समस्यालाई प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्नका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ । यसका लागि मित्रहरुले मलाई महासचिवका रुपमा उम्मेदवारीका लागि सुझावहरु दिनुभयो । मैले पनि त्यसलाई जिम्मेवारीका रुपमा लिँदै प्रस्ताव स्वीकार गरे । मेरो कार्यशैली, कार्यान्वयन पद्धतिको मूल्यांकन गर्दैै जसरी मलाई साथहिरुले विश्वास गर्नुभएको छ । त्यो चूनौतीमा म खरो उत्रने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । भोलिका दिनमा कसरी ‘स्मार्ट इक्यान’ बनाउने भन्ने विषयमा हाम्रा अगाडि चूनौतीहरु छन् तर त्यसलाई समाधान गर्नका लागि म सक्षम छु ।
महासचिवका रुपमा आगामी २ वर्षमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु के देख्नु भएको छ ?
सबैभन्दा पहिले कार्यालय व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता देखेको छु । अहिले हामी त्यहीबाट नै सुरु गर्नुपर्ने छ । हामी डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको बेलामा कार्यालयलाई सोही रुपमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि कार्यालय स्थानान्तरण गर्नेदेखि लिएर संस्थालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्नका लागि महासचिवका रुपमा मेरो जिम्मेवारी हुनेछ । र त्यसलाई म गम्भीररुपमा लिएको छु । विभिन्न विदेशी कुटनीतिक संस्थाहरुसँग समन्वय गरी विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा अग्रसर हुने, गोष्ठी, सभा, सेमिनार तथा प्रशिक्षण दिने खालका कामलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने र तीव्र बनाउने छु । इक्यान सबै सदस्यहरु माझ पुग्न नसकेको गुनासो छ । त्यसलाई पनि समाधान गर्नेछु । विभिन्न प्रकारका सूचना, जानकारीलाई सबैको पहुँचमा छिटोभन्दा छिटो प्रभावकारी सञ्चार गर्नेछु । विदेशी विश्वविद्यालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्नका लागि सेमिनार, गोष्ठि तथा इक्यानका सदस्यहरुलाई फाइदा हुने के कस्ता काम गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि अग्रसरता लिनेछु । समग्रमा इक्यानलाई व्यवसायीमैत्री संस्था र सबैको साझा संस्था बनाउने काममा मेरो पहलकदमी हुनेछ ।
इक्यानको चुनावमा राजनीतिक रुपमा उम्मेदवारहरु विभाजित देखिन्छन, यसले कार्यान्वयनको तहमा के असर गर्छ जस्तो लाग्छ ?
राजनीतिक रुपमा आस्था राख्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । तर अन्ततः हामी पूर्णतयाः व्यवसायिक भएकाले राजनीतिभन्दा व्यवसाय जहिले पनि माथि हुनुपर्छ न कि राजनीति । कुनैपनि राजनीतिक विचार व्यवसायिक सोचभन्दा माथि हुनुहुँदैन । राजनीतिक विचारबाट गरिएको व्यवसाय ढाँचाले कहिल्यै सफलता प्राप्त गराउँदैन । इक्यानमा कुनैबेला राजनीतिक विचार माथी भएका कारण व्यवसायिक सोच तल परेको देखिन्छ । चुनावको बेला त यो सतह मा आऊँछ। त्यसैको विरुद्धमा मेरो उम्मेदवारी हो । इक्यानलाई राजनीतिबाट अलग राख्नका लागि पनि मैले मेरो आवश्यकता महसुस गरेको छु ।
धेरै अघिदेखि इक्यानमा आबद्ध हुनुहुन्छ, तर निकै लामो समयपछि मात्रै उम्मेदवारी दिनु भएको छ, किन ?
म आबद्ध रहेको संस्था अर्बिट इन्टरनेशनल एजुकेशन इक्यानको पहिलो सदस्य संस्था हो । सुरुवाती दिनदेखि म इक्यानमा आबद्ध छु । आजका दिनसम्म मैले इक्यानको कार्यसमितिभन्दा बाहिरै रहेर सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको सबैलाई विधितै छ । तर कतिपय समस्या समाधान गर्न र कतिपय अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तनका लागि आफै कार्यान्वयनको तहमा पुग्नुपर्ने रहेछ भन्ने बोध भयो । त्यसैले अब महासचिवका रुपमा आफै निर्वाचित भएर हामी सबैले चाहेको बृहत इक्यान बनाउनका लागि आफै अग्रसर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने भावका साथ म अहिले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
इक्यानका आबद्ध नभएका सदस्यलाई इक्यानभित्रै ल्याउन वा उनीहरुसँग सहकार्य गर्न के गर्न सकिन्छ ?
अब सबै सदस्यहरु इक्यानभित्रै ल्याएर बृहत इक्यानको कुरा मैले गरिसकेको छु । यसका लागि बृहत छलफल आवश्यक छ । इक्यानबाहिर रहेका व्यवसायीसँग कसरी काम गर्ने भन्ने अवधारणा निमार्ण गर्न सकिन्छ । हामीले काम गर्ने एउटै हो भनेर एउटै प्रकारको आचारसंहिता बनाउन सकिन्छ । इक्यानले ती सबै व्यवसायीहरुलाई राखेर एउटा बृहत छलफल गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।
बैशाख ८ गते हुने निर्वाचनमा महासचिवका रुपमा मैले उम्मेदवारी दिएको छु । मेरो ज्ञान, क्षमता र अनुभवका आधारमा इक्यानलाई उदाहरणीय संगठनको रुपमा विकसित गराउनेछु । यी सबै कुराको उचित मूल्यांकन गरेर सदस्यहरुले मतदात गर्नुहोला । तपाईहरुको एक भोटले ईक्यानमा अव केही परिवर्तन आउँछ भन्न चाहन्छु । हाम्रो समूहमा भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ हुनुहुन्छ । त्यसैले साथीहरूले पनि महासचिवका रुपमा मलाई र विष्णुहरि पाण्डेको नेतृत्वको समूहलाई मत दिएर विजयी गराउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।